ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်သမိုင်း | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Category Archives: ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်သမိုင်း
The Over-Written, Under-Reported Middle East – Part II: 99.5 Years of (Imposed) Solitude December 18, 2015 ENGLISH, ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်သမိုင်း, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် Baher Kamal, IPS – TRANSCEND Media Service In this Part II ofatwo-part series, Egyptian-born, Spanish-national, secular journalist Baher Kamal tries to demystify some of the most common stereotypes circulating around the Middle East region. Here he explains some of the roots of its drama. Dec42015 – One hundred years ago,
Read More The Over-Written, Under-Reported Middle East – Part I: Of Arabs and Muslims December 13, 2015 ENGLISH, ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်သမိုင်း, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် Baher Kamal, IPS – TRANSCEND Media Service In this two-part series, Egyptian-born, Spanish-national, secular journalist Baher Kamal tries to demystify some of the most common stereotypes circulating around the Middle East region. Of all over-written, under-reported issues and regions, the Middle East is perhaps one of the oldest, outstanding ones. To start with,
Read More ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း – တရုတ်မွတ်စလင် အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဘဝနဲ့ အခြေအနေ September 30, 2014 ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်သမိုင်း, သုတ၊ရသ၊အထွေထွေ, ရုပ်သံ၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း Giulia Marchi ဟာ အထင်ကရ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံပညာရှင် (documentary photographer) တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အာဖရိက (Africa) နဲ့ တရုတ် (China) နိုင်ငံများမှာ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံပရောဂျက်များကို သွားရောက်ရိုက်ကူးဖန်တီးသူပါ။ BBC၊ Newsweek၊ Financial Times အပါအဝင် နာမည်ကျော် မဂ္ဂဇင်းများနဲ့ သတင်းဌာနများမှာ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံပရောဂျက်များကို တင်ဆက်ဖော်ပြခြင်း ခံရသူဖြစ်ပြီး Ca’ Foscari University of Venice ကနေ East Asian Languages အထူးပြု BA ဘွဲ့ ရရှိထားပါတယ်။ တရုတ်ပြည်က မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝနဲ့ အခြေအနေကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ Giulia Marchi ရဲ့ “Call Her Fatimah –
Read More မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာ အလျင်အမြန် တိုးတက်အောင်မြင်မှု ရရှိနေတဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာတော် (ပထမပိုင်း) October 31, 2013 Featured Posts, ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်သမိုင်း, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် (၁၉၉၄) ခုနှစ်မှာ မက္ကစီကိုနိုင်ငံ (Mexico) မြို့တော် မက္ကစီကိုစီးတီး (Mexico City) သို့ မော်ရိုကိုနိုင်ငံ (Morocco) မှ စိုဒ်လူဟာဘီ (Said Louahabi) ရောက်ရှိလာချိန်မှာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် သို့မဟုတ် အစ္စလာမစ်စင်တာ တစ်ခုမှ မရှိသေးတဲ့အတွက် သူနဲ့ အပေါင်းအပါ မွတ်စလင်တစ်ချို့အနေဖြင့် စုပေါင်းဝတ်ပြုခြင်း အပါအဝင် အစ္စလာမ်သာသနာ့အရေး ရှိလာပါက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ (Pakistan) သံရုံးသို့ သွားရောက်ကာ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ “ကျနော် ရောက်လာတော့ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နဲ့ မွတ်စလင်များ တွေ့မလားဆိုပြီး လိုက်ရှာကြည့်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပါကစ္စတန်သံရုံးမှာ အားလုံး ဆုံမိကြတော့ အယောက် (၈၀) လောက်ပဲရှိပြီး အားလုံးဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေချည့်ပါပဲ”လို့ အင်္ဂလိပ်စာဆရာ တစ်ဦးဖြစ်သူ စိုဒ်လူဟာဘီက Fox News
Read More အမေရိကန်မှာ တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟာမက်သခင်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အခန်းဆက် တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်မည် August 19, 2013 Featured Posts, ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်သမိုင်း, အမေရိက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဦးသျှောင် မဟာလူသား တမန်တော်မြတ်ကြီး မိုဟာမက်သခင်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ‘Life of Muhammad’ ကို Public Broadcasting Service (PBS) က ယခု ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက် အင်္ဂါနေ့မှာ အခန်းဆက် တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် (Virginia) အာလင်တန်မြို့ (Arlington) မှာ အခြေစိုက်တဲ့ PBS ကို ရုပ်သံလုပ်ငန်းပေါင်း (၃၅၄) ခုက စုပေါင်းထောက်ပံ့ပိုင်ဆိုင်ပြီး အမြတ်ရှေ့ရှုခြင်း မရှိဘဲ အများပြည်သူနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေအတွက် ပညာရေးနဲ့ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်တွေကို တင်ဆက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။ PBS က ထုတ်လွှင့်တဲ့ အတွက်ကြောင့်